घरमा फोहोर बढेर हैरान हुनुहुन्छ ? इ एम को सहयोग लिनुहोस् | Wash Khabar
घरमा फोहोर बढेर हैरान हुनुहुन्छ ? इ एम को सहयोग लिनुहोस्
Share the post "घरमा फोहोर बढेर हैरान हुनुहुन्छ ? इ एम को सहयोग लिनुहोस्"
काठमाडौ : तरकारीको बोक्रा, फलफूलको बोक्रा, बढी भएको खानेकुरा लगायत घरमा उत्पादन हुने धेरै जैविक फोहोरहरु बढेर तपाई हैरान हुनुहुन्छ होला ? कुहाएर मल बनाउ भने त्यसको गन्धले कोठा र आसपासको वातावरण नै दुर्गन्धित हुने सम्भावना, यत्तिकै राखौं नगरपालिकाको फोहोर लिन आउने गाडी समयमै नआउँदा त्यसै पनि फोहोर गन्हाउन थाल्छ ।
फोहोर खेर पनि नजाने, पैसा कमाउन पनि सकिने र नगन्हाउने पनि । यसका लागि एउटै विधि छ, इ एम (Effective Microorganisms) प्रयोग गर्ने । इ एमको प्रयोगबाट जैविक अर्थात कुहिने फोहोरलाई मल बनाउने र कौसी खेती, करेसाबारी अथवा गमलामा रोपिएको फूलमा हाल्ने ।
इ एम (Effective Microorganisms ) प्रयोग गर्ने विधि
तपाई हाम्रो घरमा उत्पादन भएका फोहोरलाई कुहिने र नकुहिने फोहोर बेग्लाबेग्लै छुट्याउने । कुहिने फोहोरलाई एउटा बकेटमा जम्मा गर्ने । बकेटमा जम्मा गरिएको फोहोरमा अब पानी र इ एम मिश्रित घोल छर्कनुपर्द । इ एम घोल छर्किदा यसको पानी र इ एम को मात्रा मिलाउनुपर्दछ ।
इ एम उत्पादन तथा वितरण गर्दै आएको महिला उद्यमी उपभोक्ता सहकारी संस्था लिमिटेडकी सचिव निर्मला श्रेष्ठका अनुसार १ लिटर पानीमा १० मिलिलिटर इ एम राखे पछि फोहोरमा छर्किनुपर्दछ । फोहोरको सबै भागमा पर्ने गरी छर्केपछि फोहोरलाई एक महिनासम्म छोपेर राख्नुपर्छ ।
इ एम घोलको प्रयोगले दुर्गन्ध नआउने र फोहोर कुहाउन पनि मद्दत गर्ने श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
इ एम के हो ? (Effective Microorganisms )
प्रकृतिमा धेरै थरीका सुक्ष्म जीवाणुहरु पाइन्छन् । तिनै मध्येका उपयोगी सुक्ष्म जीवाणुहरुलाई प्राकृतिक तवरले मिश्रित गरी इ एम तयार पारिन्छ ।
यो जापानी प्रविधिबाट नेपालमै उत्पादित बहुउपयोगी तरल पदार्थ हो । इ एम ले सुक्ष्म जीवाणुलाई बढाएर गन्धलाई न्यूनीकरण गर्दै फोहोरलाई कुहाउन सहयोग गर्छ । अनुकुल वातावरण पाए लगत्तै उपयोगी सुक्ष्म जीवाणुको संख्या बढ्दै जान्छ र विस्तारै माटोको उर्वराशक्ति पनि बढाउँछ । इ एम लाई अन्य दुर्गन्ध हटाउनका लागि समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ ।